Jilaa Caan Ah Oo U Dhashay Dalka India Oo Geeriyooday Dec 6, 2017 : Salaan Media
Jilaa Caan Ah Oo U Dhashay Dalka India Oo Geeriyooday Dec 6, 2017
Dec 6, 2017 Boorama (SM) –Shashi Kapoor oo ka mid ahaa aktaradii ugu caansanaa ee jilay aflaamta Hindiga ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaal magaalada Mumbai dalka Hindiya isagoo 79 jir ah.
Jilaaga Shashi Kapoor xanuun kaga dhacay feeraha waxaana la dhigay isbitaalka Kokilaben Ambani Hospital, basle geeridiisa waxaa xaqiijiyay walaalkii Randhir Kapoor.
Shashi Kapoor ayaa filimkii ugu horeeyay Dharmputra ee uu jilay waxa uu soo baxay sanadkii 1961kii intaa kadibna waxa uu jiley illaa 161 filim oo laga daawaday caalamka oo idil.
Jilaaga Shashi Kapoor ayaa waxaa uu ka tagay saddex carruur ah, labo wiil Kulan iyo Karan iyo gabar Sanjana Kapoor.
Qoyska uu ka dhashay jilaagan ayaa ah qoys caan ku ahaa jilida aflaamta waxaana jilaagan geeriyooday aabe u ahaa Prithviraj Kapoor waxaana ay walaalo ahaayeen Raj Kapoor iyo Shammi Kapoor.
Shashi Kapoor ayaa intii uu noolaa waxa uu helay bilado iyo abaalmarino kala gedisan kuwaasoo uu ku helay aflaamta uu sameeyay.
Jilaaga Shashi Kapoor iyo xaaskiisa Jennifer Kendal ayaa waxa ay aasaaseen Tiyaatarka caanka ah ee Prithvi sanadkii 1978dii. Jennifer ayaa u geeriyootay cudurka Kansarka sanadkii 1984.
Aflaamta aadka loogu xusuusto Shashi Kapoor waxaa ka mid ah Deewar,Shaan,Suhaag,Kabhi Kabhie iyo weliba Silsila. Aktarkan Shashi Kapoor ayaa waxa ay filmaan badan isla sameeyeen aktarka kale ee caanka ah Amitaph Bachchan. Sidoo kale aktarkan ayaa ku jilay aflaam badan luqada Englishka.
Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa aflaamta uu jilo aktarka caanka ah ee Shashi Kapoor aad looga daawan jirey shaleemooyinkii lagu dhigi jirey filmaanta hindiga sida shaneemo Super,Africa,Nassar,Somalia iyo qaar kaleba.
« Daawo Muqaal:: Cisbitaalka wareegga oo laga hirgaliyay magaalada Hargeysa..06.12.17
DEG DEG:Dawlada Emaratka Carabta Oo Cadaysay Siyaasadeeda Somaliya Meeshana Ka Saartay Somaliland Khashiftayna Heshiisyadii DP World Iyo Saldhiga Berbera In…06.12.17 »